Wasaaradda Dekedaha Puntland oo dadweynaha Boosaaso uga warbixisay Mashruuca lagu ballaarinayo Dekeda[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Wasaaradda Dekedaha Puntland oo dadweynaha Boosaaso uga warbixisay Mashruuca lagu ballaarinayo Dekeda[Sawirro]
Wasiirka Dekedaha iyo Gaadiidka Badda Puntland Siciid Maxamed Raage
BOOSAASO – Waxaa maanta lagu qabtay xarunta dowladda hoose ee magaalada Boosaaso kulan ballaaran oo looga hadlaye ballaarinta Dekeda weyn ee magaalada.
Kulankan ayaa waxaa kasoo qeybgalay maamulka gobolka kan degmada Boosaaso iyo Wasaaradda Dekedaha iyo gaadiidka Badda iyo qaar kamid ah bulshasa magaalada.
Ujeedada kulanka ayaa ahaa sidii bulshada reer Puntland faahfaahin looga siin lahaa qaabka loo ballaarinayo Dekeda magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.
Cabdimajiid Samatar Jaafaan
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Dekedaha Puntland Cabdimajiid Samatar Jaafaan oo ugu horeyn kulanka ka hadlay ayaa sharaxaad dheer ka bixiyey qaabka ay Dekeda Boosaaso u shaqeynayso.
Cabdimajiid Samatar Jaafaan ayaa sheegay in Dekedda Boosaaso ay tahay Dekeda ugu yar Soomaaliya marka loo eego Dekdaha kale ee ka jira dalka.
Dekadda Boosaso waxa ay u baahan tahay in la ballaariyo, haddii aan la ballaarinna ay istaagi doonto shaqada ka socota, waayo waxaa ku soo xirta markabyo aan loogu tala gelin in ay ku soo xirtaan ayuu yiri Cabdimajiid Samatar Jaafan agaasimaha guud ee wasaaradda dekaha Puntland .
Siciid Maxamed Raage oo ah Wasiirka Dekedaha iyo Gaadiidka Badda Puntland oo isna madasha ka hadlay ayaa sheegay in dhawaan uu bilaabanayo mashruucii lagu ballaarinayey Dekeda.
Waxa uu sheegay in aysan jirin guryo la burburinayo iyadoo wax kama jiraan ku tilmaamay Wasiirku warar ay bulshada Boosaaso ay isla dhexmarayeen kaasoo ahaa in la duminayo guryaha u dhow Dekeda.
Ma jiraan guryo la bur-burin doono, dekadda ayaa la ballaarinayaa, waana mashruuc weyn oo hormar u ah bulshada Bosaso, reer Puntland iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ayuu yiri wasiirka dekadaha iyo gaadiidka badda Puntland Siciid Maxamad Raage.
Qaar kamid ah nabadoonadii ka qeybgalay kulanka ayaa sheegay iney soo dhaweynayaan mashruuca lagu ballaarinayo Dekedda Boosaaso ,waxayna madaxda Puntland ugu baaqeen in shacabka reer Puntland sidan oo kale u qanciyaan markii uu soo dhexgalo tuhun iyo warar been abuur ah.
Nabadoon Abshir Dhagcas
Kulankan ayaa kusoo aaday xili maalmihii u dambeeyey Boosaaso ay shirar ku qabaneyeen nabadoono iyo Waxgarad kale oo kasoo horjeeda in Dekedda Boosaaso lagu wareejiyo Shirkad laga leedahay dalka Imaaraatka Carabta.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in mashruuca ballaarinta Dekedda Boosaaso la daahfurayo maalinta Axada ah ee 01. Oktoobar 2017-ka.